Tian’ireo Mozambikanina Ho Fantatra Raha Toa Ka Ao Ambadik’ireo Fanafihana Biraon’ny Mpitandro Filaminana Ny Vondrona Mpikatroka Al-Shabaab · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2017 15:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Ελληνικά, Português
Mpikatroka maro ao anatin'ilay vondrona mahery fihetsika, izay mifehy ny ampahatelon'i Somalia ankehitriny ary nitarika fanafihana tany amin'ny firenena Afrikana hafa. Sary: Pikantsary nalaina tamin'ny tati-baovaon'ny Channel 4 tao amin'ny YouTube tamin'ny 2013.
Lehilahy 30 teo ho eo nisaron-tava no nanafika birao telo an'ny mpitandro filaminana tany amin'ny faritra avaratr'i Mozambika nandritra ny telo andro, niteraka ny ahiahy hoe mety efa tonga ao amin'ny firenena ny al-Shabaab, vondrona mpikatroka izay nitolona an-kerisetra nandritra ny taona maro mba hanerena ny fanazavana (fandikàna) ny lalàna Silamo tao Somalia.
Niparitaka manerana ny faritra mirefy 70 kilometatra ao amin'ny distrikan'i Mocímboa da Praia, manakaiky ny sisin'i Tanzania ireo birao telo an'ny mpitandro filaminana ireo, ary niaraka voatafika tamin'ny faha 5 hatramin'ny 7 oktobra, manambara ny fisianà hetsika efa voapetrapetraka tsara (maty paika).
Raha ny filazan'ny mpitondrateny iray ao amin'ny mpitandro filaminana, nahafatesanà olona miisa 16 ilay fifandonana, ahitàna polisy roa sy mpanafika nitam-basy miisa 14. Nilaza ireo loharanom-baovao ao an-toerana, araka ny tatitra iray nataon'ny tranonkala mpitatitra vaovao NNA, fa fitaovam-piadiana fitondran'ny mpitandro filaminana no teny amin'ireo mpanafika ireo, ary nisy mpikatroka sasany tratran’ ny polisy sambo-belona ka efa anaovana fanadihadiana.
Nanambara ihany koa ny polisy fa mahay fiteny telo farafahakeliny ireo lehilahy mpitam-basy ireo araka ny vinavinan'izy ireo dia : Kiwali (fiteny iray eo an-toerana), ny Paortigey (ny fiteny ofisialin'i Mozambika), ary Swahili (izay ampiasain'ny ankamaroan'ny mponina amin'ireo firenena ao amin'ny faritry ny Great Lakes / Farihy Lehibe).
Nisy ny fiahiahiana io vondrona io ho manana fifandraisana amin'i al-Shabaab izay ankehitriny mifehy ny ampahatelon'i Somalia ary nanao fanafihana tany amin'ny firenena Afrikana hafa.
Niforona tamin'ny taona 2006 ny vondrona Somaliàna, taorian'ny nandravàna ny Fikambanan'ny Fitsaràna Islamika, izay resin'ny tafika Etiopiana ary tsy nahafehy an'i Mogadishu renivohitra izay teo ambany fifehezan'izy ireo nanomboka tamin'ny 2000. Tavela tsy nisy governemanta nahomby i Somalia nanomboka tamin'ny taona 1991 ary nijaly vokatry ny fifandonan'ireo ankolafy mpifanandrina.
Ny Al-Shabaab, izay adika amin'ny fiteny Arabo hoe “ny fahatanorana”, dia manao asa fitoriana ny Wahhabism, fandikàna fototra ny finoana Silamo niaina avy any Arabia Saodita, ary mampivady ny fampiharana hentitra ny sharia izay miresaka fahafatesana amin'ny alàlan'ny fitoraham-bato ireo vehivavy voampanga ho nijangajanga sy ny fanapahana ny tànan'ireo tratra nangalatra.
Manodidina ny 18% -n'ny mponina ao Mozambika no milaza ho Silamo, mipetraka any amin'ny faritra avaratry ny firenena ny ankamaroany.
Nambaran’ireo manampahefana ao amin'ny polisim-pirenena fa tsy mbola misy aloha hatreto fomba hahafahana mamantatra hoe tena nokononkononin'ny al-Shabaab tokoa ireo fanafihana ireo, fa nihamafy hatrany ny fanontaniana mipetraka tao amin'ny haino aman-jery sosialy.
Nametraka fanontaniana vitsivitsy i Egídio Vaz, mpanentana fantadaza iray :
Raha manana ny vondrona Al-Shabaab na tsia isika rehetra eto Mozambika, dia ireto manaraka ireto ny hevitro manokana:
-Raha kilavadavaka misy eo amin'ny sisin-tanintsika, ny fandriampahalemana ary ny rafitra fanarahamaso, dia mety ho tena ny Al-Shabaab tokoa izy ireo.
-Na izany aza, dia tsy mino velively aho hoe hanao ny asa fitoriany no ataony ao Mozambika. Angamba ity firenena ity ataon'izy ireo toerana fandraisana mpiasa / na toeram-panofanana ary avy eo “mandefa” ireny miaramila ireny any amin'ny toeram-piadiana maro samihafa.
NA HOANA NA AHOANA ALOHA, dia eto ry zareo. Tsy maintsy miatrika azy ireo ny manampahefana Mozambikanina mba tsy ijerena indray ny firenena ho toy ny toerana iray fialokalofan'ireo fahavalo iraisam-pirenena, izay atahoran'ny maro monins any amin'ireo renivohitra maro ao amin'ny faritra avaratra rehetra.
Nitafatafa tamin'ny mponin'i Mocímboa da Praia ny gazety O País – izay misy mponina eo amin'ny 25 isa mahery kely eo fotsiny – ary nanao tatitra fa “tsy misy na iray aza amin'ny mponina amin'io tanàna io no manana ahiahy na dia kely fotsiny aza hoe ireo mpikambana avy ao amin'io sekta Al-Shabaab voalaza etsy ambony io no nanatanteraka ireo fanafihana ireo”.
Raha ny voalazan'ny olona nohadihadiana tamin'ilay tatitra, mitantana maoske roa ao an-tanàna ny al-Shabaab, izay tsy nisy olona tamin'ireo andro nitrangan'ny fanafihana, ary nanambara ireo lehibe mpitarika fa tokony ho foanana ireo tsangambaton'olona sy ny tsangambato Kristianina ao an-tanàna ireo ary ho hentitra ny fampiharana ny lalàna Silamo.
Mpivarotra iray antsoina hoe Amade Mussa no nilaza tao anaty tatitra fa ny ankabeazan'ireo mpikambana ao amin'ireo maoske ireo dia mponina eo an-toerana avokoa, lehilahy anelanelan'ny 25 sy 35 taona :
Fantatray fa avy any Mocímboa da Praia avokoa izy ireo. Ny sasany avy any Mocoche ao Macomia, misy koa hafa avy any Palma, Nangade ary Montepuez. Ary fantatray fa avy eto ny sasany. Fa nanomboka tamin'ny faha 6 ny volana dia lasa izy ireo. Fa tsy haiko raha misy olona avy any Somalia.
Nanamarina io voalazan'i Amade io i Fernando Neves, filohan'ny distrikan'i Moacimba da Praia, kanefa niteny izy fa tsy midika akory izany hoe misy fifandraisany mivantana amin'ny al-Shabaab ao Somalia izany.
Tanora izy ireo ary mieritreritra fa, rehefa manao izany dia tafiditra ho mpikambana anatin'io vondrona io, saingy tsy manana fifamatorana amin'izy ireo ry zareo.
Teratany Angoley i João Ventura, ary matahotra sao hitranga ihany koa any amin'ny fireneny miteny paortigey toy io ity karazana herisetra ity:
Ny zava-misy: Ao Mozambika, nisy fanafihana nitàm-piadiana tsara omana niseho tao amin'ny tanàna iray tao amin'ny firenena izay tany am-boalohany dia nolazaina fa nataon'ny mpanafika tsy fantatra anarana.
Ireo mpanao ratsy: Ireo Silamo mahery fihetsika izay mitonon-tena ho Alshabab.
Ny tanjona: hametraka fanjakàna Silamo ao Mozambika.
Lesona azo tsoahana: Tokony ho fehezina tsara ary arahana maso tsara mihitsy ny fiparitahan'ny Silamo ao Angola mba hisorohana ny trangan-javatra toy izao.
Tsy ny fampitandremana sy ny ohatra akory no tsy misy.
Mozambikanina Silamo i Ashraf Sidat, izay nandrisika ny vahoaka tsy hanaiky ho ampitahorina, satria kasahan'ireny vondrona ireny ny hampisaratsaraka ny firenena:
*RY RAHALAHY MOZAMBIKANINA*…
Aza manaiky ho voafandrika, aza latsaka amin'ny fampilendalendan'ny mpanararaotra… Ny tanjon'ny trangan-javatra niseho tany avaratry ny firenena io dia ny hamoronana ady satria ny hany fikasan'ireo firenena any ivelany dia ny hampisaraka firenena sy hanjakazaka ao…! Ahoana ny fomba hanaovana an'izany!
Ny zavatra ataony voalohany indrindra dia ny manenjika ireo izay manao kolikoly ka rehefa tsy mahomby izany, dia manantona ireo antoko mpanohitra izy ireo ary manome azy ireo fitaovam-piadiana sy fahefana. Ary raha mbola tsy nahitàna vokany tsara koa izany dia ataony izay hidirany ao amin'io firenena io mba hamoronany fifankahalana sy fahatezerana eo amin'ireo foko sy finoana… hananganana ady izany rehetra izany!
Fantatsika rehetra fa manankarena ny faritra avaratry ny firenena ary ozona ho azy io harena io. Irian-dry zareo ny ady sy ny fahafatesana mba ho afaka mamatsy vola ireo mpifanandrina andaniny sy ankilany ary izy ireo kosa manangona ireo trosan'ady miaraka amin'ny loharanon-karena.
Solika sy diamondra ary volamena!